သဝန်တိုတယ်ဆိုတာ သဝန်တိုခံရသူအတွက်လည်း မကောင်းသလို သဝန်တိုသူအတွက်လည်း ပူလောင်ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သဝန်တိုခြင်းကြောင့် ဆက်ဆံရေးတွေ ပျက်ပြားသွားကြရတာတွေလည်း အများအပြားပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ ပါတနာဟာာ တစ်ခြားတစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ နီးကပ်လွန်းစွာ နေထိုင်ခြင်း (သို့) လုပ်ငန်းခွင်မှာ တစ်ခြားတစ်ယောက်နဲ့ သီးခြားလုပ်ကိုင်ရတဲ့အခါ စိတ်ပူပင်မှုတွေဖြစ်လာပြီး မကြာခဏမနာလိုသဝန်တိုတာတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။ မနာလိုမှုရဲ့ ရင်းမြစ်တွေဟာ ကိုယ့်အနားမှာမရှိတော့ဘူးလို့ ခံစားရရုံမျှနဲ့ ပိုပြီး နက်ရှိုင်းသွားကြပါတယ်။
ကျွန်မတို့ဟာ ဘာကြောင့်မနာလိုမှုတွေကို ခံစားနေရတာလဲ
မနာလိုမှုဆိုတာ စိတ်မလုံခြုံမှုတွေဖြစ်လာခြင်းနှင့် စိတ်ခံစားချက်တွေကို ခြိမ်းခြောက်ခံရခြင်းကနေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ ကျွန်မတို့ အရမ်းတန်ဖိုးထားရတဲ့အရာတစ်ခုဟာ ပျက်စီးတော့မယ်လို့ ခံစားရတိုင်း ကျွန်မတို့က ပူလောင်ကြရပါတယ်။
မနာလိုတဲ့ခံစားချက်တွေဟာ အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ပါတနာက မရိုးမသားလုပ်ခြင်း (သို့) ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ခြင်းကနေ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပေမယ့် မနာလိုမှုရဲ့ တကယ့်ရင်းမြစ်က သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် သင့်ခံစားချက်တွေအပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်။ သင်ဟာ ပျော်ရွှင်ပြီး လုံခြုံမှုကို ခံစားရတဲ့အခါ မနာလိုတဲ့ခံစားချက်တွေကို ခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် ကိုယ့်ပါတနာက ကိုယ့်ကို ဘယ်တော့မှ စွန့်ပစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်လည်း သဝန်တိုမှုတွေကို နည်းပါးစေပြီး ဆက်ဆံရေးဟာ ပြီးဆုံးတော့မယ်လို့ယုံကြည်နေရင်လည်း ဆက်ဆံရေးဟာ ရှင်သန်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သဝန်တိုခြင်းဟာ ဆိုးဝါးတဲ့သံသရာနဲ့ တူပါတယ်။ မနာလိုမှုစတင်လာတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် တစ်ခြားသော အပျက်သဘောခံစားချက်တွေဖြစ်တဲ့ အမျက်ဒေါသ၊ အကြောက်လွန်ရောဂါ၊ အကူအညီမဲ့ခြင်းနှင့် ဝေဖန်အကဲခတ်လွန်းခြင်းစတဲ့ ခံစားချက်တွေကလည်း ကပ်ပါလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် မနာလိုစိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါ သင့်ပါတနာကို ဖွင့်ပြောဖို့ မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။ ဖြေရှင်းပါ။
ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူတွေဟာ ပိုပြီးမနာလိုဖြစ်လာကြသလား?
ဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်ဟာ ဖုံးကွယ်စရာနေရာတွေများလွန်းသလို လူတွေဟာ အတုအယောင်တွေများလာကြပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာကြောင့်ပဲ လူတွေက ပိုပြီးဟန်ဆောင်လာကြပြီး မနာလိုမှုတွေကလည်း တကယ်များလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မနာလိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပေမယ့် လူတွေကို ဖွင့်ပြောလေ့မရှိပါဘူး။ အကြောင်းရင်းကတော့ ရှက်ရွံ့ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်မှုကင်းမဲခြင်းတွေကို ခံစားရပြီး အကဲဖြတ်ခံရမှာကို စိုးရိမ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
မနာလိုမှုဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလား?
လူတစ်ချို့တွေက ဆက်ဆံရေးတစ်ခုရှင်သန်ဖို့ မနာလိုမှုလိုအပ်တယ်လို့ ခံစားကြရပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုလေးက ပျော်စရာကောင်းတာ မှန်ပါတယ်။ ရေရှည်မှာ ကျန်းမာသောမိတ်ဖက်နဲ့ အချိန်တွေအကြာကြီးလက်တွဲချင်တယ်ဆိုရင် မနာလိုမှုဟာ မကောင်းတဲ့ခံစားချက်တစ်မျိုးပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသိနည်းလေလေ၊ ပါတနာရဲ့ အာရုံစိုက်မှုရဖို့ ကြိုးစားရင်း စွန့်ပစ်ခံရခါနီးလေလေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။